अयोध्यामा ५ सय बर्षको पुरानो राम मन्दिर बन्ने भएपछि जनकपुरमा लड्डु बाँडियो, आज दिपावली ! | अपन जनकपुर
अयोध्यामा ५ सय बर्षको पुरानो राम मन्दिर बन्ने भएपछि जनकपुरमा लड्डु बाँडियो, आज दिपावली !
जनकपुरधाम२३,कार्तिक । विगतमा पाँच सय वर्षदेखि विवादित रहेको भारत युपी राज्यको अयोध्यामा राम मन्दिर बन्ने भएपछि जनकपुरमा मिठाई बाँडिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिनमा रामजन्मभूमि न्यासको हक रहने फैसला गरेपछि जनकपुरधाममा खुसीयाली मनाइएको हो । जानकी मन्दिरका साधुसन्तहरुले अयोध्यासँग जनकपुरको पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै राम मन्दिरको लागि अदालतले हरियो झण्डी देखाएलगत्तै जनकपुरमा पनि खुसीयाली छाएको छ । जानकी मन्दिरमा साधुसन्त, चोक तथा घरघरमा सर्वसाधरणले मिठाइ बाँडेर आपसमा खुसीयाली मनाएका हुन् ।
अयोध्या विवादमा भारतको सर्वोच्चले सुनाएको फैसला जनकपुरधामको लागि पनि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै आज जनकपुरको जानकी मन्दिर सहित विभिन्न ठाउँमा दिपावली समेत गर्ने जनाइएको छ । माता सीताको जन्मभूमि जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष अयोध्याबाट जन्ती (बाराती) आउनेमा यसपाली ज्वाईंको घर निर्माण हुने भएपछि परम्परा अनुसार पनि खुसीयाली मनाएको जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले बताए ।
अयोध्यामा राम मन्दिरको लागि अदालतले फैसला दिएपछि केही समुदायहरु खुसीयाली मनाएका छन् भने समाजिक सञ्जाल सहित अन्य सँजाल मार्फत खुसी साटासाट गरेका छन् । हालाकी जनकपुरमै धेरै समुदायको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झै पनि देखिएको छ । जनकपुरका मुस्लिम समुदायका केही युवाहरुले समाजिक सञ्जाल मार्फत पक्षमा खुसीयाली जताएपनि त्यही समुदायका कैयौं व्यक्तिहरुले असन्तुष्टि समेत जनाएको देखिएको छ ।
जनकपुरधामलाई भगवान रामको ससुराली मानिएको र पाँच सय वर्ष पुरानो विवादको आज टुँगो लागेपछि अयोध्याको जमिनमा राम मन्दिर बन्ने पक्कापक्की भएपछि जनकपुरमा खुसीयाली मनाइएको हो । यता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो फैसलालाई हार वा जीतको रुपमा नलिन आग्रह गरेका छन् । राम मन्दिरको पक्षमा खुसीयाली मनाए सभ्य तरिकाले मनाउन बताउँदै कुनै अन्य समुदायलाई अहसज हुने गरी खुसीयाली नमनाउन पनि आग्रह गरेका हुन्